Zụ ihe na nhọrọ nke ngwaahịa | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akụrụngwa: Ịzụta na nhọrọ nke ngwaahịa
Kedu ụdị mkpụrụ osisi ma ọ bụ mkpụrụ nwere ntụpọ ojii / mkpụrụ osisi na foto ahụ?
Kedu ụdị mkpụrụ osisi ma ọ bụ mkpụrụ nwere ntụpọ ojii / mkpụrụ osisi na foto ahụ? mmasị mkpụrụ) Anya nke dragọn (pitahaya, pitahaya, ọnwa yang, dragon mkpụrụ, pitaya). Anya dragọn ahụ bụ nsụgharị Russian nke aha nke mkpụrụ a. Aha mba uwa bu Mkpụrụ ...
Kedu ihe dị iche n'etiti onyinye na bagel?
Kedu ihe dị iche na bagel na bagel? Ahụghị m ihe dị iche. Bagel - bagel na-adị nro. Bagel - ihe eji eme bred na udiri mgbanaka, emere site na mgwacha ahihia (obere bagel, ma karia ihicha).
Kedu ihe nkwụnye osisi?
Kedu ihe ejiri osisi mee? Site na azụ ọcha site na mgbakwunye nke e ji esiji ọnụnụ Ọ bụghị otu merụrụ ahụ merụrụ ahụ na nke a. Enwere ọtụtụ Ezi ntụziaka - ọ dabere na akọ na uche nke onye rụpụtara ya. Osikapa, ...
Kedu esi chọpụta ma caviar dị na salmon pink, n'emeghere azụ ahụ?
Kedu esi chọpụta ma caviar dị na salmon pink, n'emeghere azụ ahụ? Anaghị m aghọta ihe mere nsogbu ndị dị otú ahụ, ọ bụrụ na ọ bụghị ihe siri ike ịzụta ihe ọma, caviar anụ ahụ nke salmon pink. Lee otu ihe ahu ...
Ọ dị onye zụrụ mkpụrụ osisi strawberry jam Makheev, gịnị dị na ngwakọ nke onwu?
Nwere onye zụrụ Strawberry jam Maheev, ihe dị na onwu, ikekwe? Maheev nwere sodium benzoate na potassium sorbate - ihe dị oke njọ nye ahụ mmadụ. M na-akwado gị ma ụdị mgbochi na ...
Dee m ihe mgbochi nke ọ bụla Lays ibe m chọrọ maka onwu!
Dee ihe omuma nke ihe ndi ozo Lays choro maka onwu! Ejiri m uto nke Leys na uto nke MEGA anụ ezi, yabụ: ọdịnaya kalori - 510 kcal na narị gram, protein - 6,5 g, carbohydrates…
Kedu otu esi achọpụta ezigbo caviar uhie site na adịgboroja?
Kedu otu esi achọpụta ezigbo caviar uhie site na adịgboroja? ihe ọ bụla ma ọ bụghị uto, ma n'ozuzu, caviar dị elu bụ nke ya onwe ya wepụtara na ndị ọhụrụ ga-enye caviar n'ụlọ ahịa na ebe ...
Ebee ka ịzụta ụlọ Caspian azụ azụ?
Ebee ka ịzụta ụlọ Caspian azụ azụ? Caspian herring (Alosa kessleri) ma ọ bụ Kessler azụ azụ, bụ nwa ogwu, sitere na ezinụlọ azụ azụ, bụ otu n'ime ndị nnọchiteanya dị otú ahụ dị ka: Atlantic herring, Pacific, sardine and ...
Gwa m ole ka kg 1 nke mmanụ aṅụ dị na Moscow na ahịa?
Gwa m ole ka kg 1 nke mmanụ aṅụ dị na Moscow na ahịa? Azụtara m euro maka kilogram maka 8 na Germany na ọdịda. Site na 350 rubles. Dabere na ụdị mda. Ugbu a ...
Ntak emi mmiri ara ehi adịghị esi
Ihe kpatara na mmiri ara ehi adịghị esi nri ma ọ bụrụ na agbakwunye soda. E nwere ọgwụ nje na mmiri ara ehi, ọ dịkwa mma ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị maka ịgwọ ndị mmadụ, ma ọ pụkwara ịbụ ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ. ya mere ...
Kedu ụdị azụ ndị dị ọnụ ala ma dị ụtọ?
Kedu azụ̀ dị ọnụ ala ma dị ụtọ? Koodu (acha anụnụ anụnụ na-acha ọcha dịka ọmụmaatụ) nke raw - pollock, na smoked - azụ asa. Dị ụtọ nke ukwuu, ọkụ dị na ibu. Haddock, anyị nwere 113r kwa 1 n'arọ (na…
Otu esi amata ezigbo min. Essentuki mmiri si adịgboroja?
Otu esi amata ezigbo min. Essentuki mmiri si adịgboroja? okwute na-ese n’elu ikpuru adịgboroja na ihe niile. Ekwesịrị igosipụta ọnụ ọgụgụ dịka ọmụmaatụ: 4,6,17, wdg, gaa Essentuki ma straightụọ ozugbo ...
Ego ole bụ kilogram nke ọhụụ ọhụrụ ma ọ bụ ndụ?
Ego ole bụ kilogram nke azụ ọhụrụ ma ọ bụ nke ndụ? ihe dị ka 500r. Ternyaahụ azụrụ m na Okey, St. Petersburg Azụ niile Karelian trout 1 n'arọ ihe dị ka - 160-170 rubles / n'arọ (gutted na gutted) n'oké osimiri Norwegian ...
Nke a bụ nri gụnyere akwụkwọ 4, gịnị bụ aha ahụ?
nri a mejuputara na akwukwo ozi 4, gini ka ana akpo ya? Njọ !!! Aga m asị na ndị a bụ ọka nke COFFEE .... mana otu ihe ... abughi nri… Oriri nri. Onye anaghị eri anụ nke biosphere mejupụtara ya…
Ndewo .. ezigbo osi ite. Gwa m ... Kedu otu esi achọpụta ezigbo nke shuga shuga?
Ndewo .. ezigbo osi ite. Gwa m ... Kedu otu esi achọpụta ezigbo nke shuga shuga? Na isi ya, a na-ekpochapu shuga na-acha aja aja ma na-agbachi ya n'ụzọ pụrụ iche ka ihe ọṅụṅụ shuga na-ekpuchi kristal shuga. Ọchịchịrị agba ...
Nri mmeghari nri - olee ndi?
Nri mmeghari nri - olee ndi? Ọ bụchaghị aka gbaa ụka. Enwere ike inwe mmetụta na gbaa ụka n'ime eriri afọ bụ n'ihi nsonaazụ nke afọ na-emepụta, dịka mgbe ị coffeeụ kọfị siri ike: kafiin na catechols, nke…
Ego ole ka kabeeji riri ugbu a?
Kedu ka kabeeji si maa jijiji ugbu a? A na-ere kabeeji. anyị nwere na mpaghara Moscow - 5 rubles maka 1 n'arọ. Ọ dabeere na ịdị arọ nke nchacha gburugburu ebe ọ bụla) Ọ bụrụ na Kg, then rubles ...
Kedu ihe bụ ihe ịrịba ama nke botulism na nri mkpọ, pickles, kedu ka o si egosipụta onwe ya?
Kedu ihe bụ akara nke botulism na nri mkpọ, achịcha, olee otú nke a si egosipụta onwe ya anya? .. n'ụzọ ọ bụla! na ịtọ ụtọ, ndị dọkịta ekwupụtaghị ihe ọ bụla .... botulism anaghị etolite na mpaghara acidic mgbe enwere nsí - ozugbo ...
Kedu pasent abụba kwesịrị ịbụ na mmiri ara ehi nkịtị?
Kedu pasent abụba kwesịrị ịbụ na mmiri ara ehi nkịtị? Nnukwu ọka bọta nke a nwetara site na ude ma na-agbaso ihe ndị GOST 3791 chọrọ, ya na ọdịnaya abụba ma ọ dịkarịa ala 82,5%. Na mmanụ amateur oil 78% ...
Kedu ihe oriri nwere hormones ndị nwoke?
Kedu ihe oriri nwere hormones ndị nwoke? Anụ anụ na-abụchaghị abụba, àkwá bụ ihe oriri ndị nwere protein zuru oke anụmanụ nke na-arụ nnukwu ọrụ maka ọnọdụ homonụ. Ngwuputa anu ulo na pollen na perga bu irigide megide prostatitis ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 1,201.